Ndiye ndavuza iimpawu eziziswa yinguqulelo entsha ye-PlexEarth, ekulindeleke ukuba ibhengezwe ekupheleni kuka-Oktobha 2011. Isizathu esona sizathu sokuba esi sixhobo sibe nokwamkelwa okubalulekileyo kukuba ...
I-Cadapult kutshanje ibhengeze ukupapashwa koshicilelo lwayo olutsha: Ukwemba ngokuNzulu kwi-AutoCAD Civil 3D 2011 416 amaphepha ahlelwe kwizahluko ze-7 kunye ne-CD equka uqheliselo oluphuhliswe kwicandelo ngalinye, phantsi kobunkokeli bukaRick Ellis. …
…yeyona ilungileyo, emva kokuba i-AUGI MexCA iye kulondolozo… Ngexesha elidlulileyo ndiye ndaphonononga i-AUGI kwisahluko sayo setropikhi, nesixa esixabisekileyo semithombo yabasebenzisi be-AutoCAD Civil3D kunye neetekhnoloji zeMaphu. Ngelishwa i…
Eli xesha lonyaka lidla ngokusebenza kakhulu ekukhutshweni kweenguqulelo ezintsha kunye nezisombululo zomxholo we-geospatial. Apha ndishwankathela ubuncinci be-10 endibambe ingqalelo yam kwiintsuku zokugqibela, iiyure kunye nemizuzu. I-ERDAS, ibonelela...
Esi sesinye sezisombululo ezininzi ezibonelelwa yi-Eagle Point, inkampani efanayo eyathi kwiminyaka yoo-XNUMX yasimangalisa ngayo yonke into engenziwanga yi-AutoCAD. Emva kokuphola kancinane, apho wayefuna ukuzinikela...
Kule nyanga ushicilelo olutsha lwe-Geoinformatics lufikile, lunemixholo eyingozi kakhulu kwi-CAD, i-GIS, imvakalelo ekude, ulawulo lwedatha; imiba engasayi kubonwa yodwa. Ngokomgaqo ndibonisa uhlalutyo lwenye ye…
Kwiiprojekthi zobunjineli ezibandakanya uphuhliso lophuhliso lwezindlu, iindlela, uhlolo, kunye nothungelwano lwemibhobho, i-AutoCAD Civil 3D 2011 ibonakalisa ukuba sisixhobo esibalulekileyo. Emva kwendaleko ebisenzeka kule software, kwinguqulelo ka-2011 unga...
Ngokutsiba kunye nemida uFacebook usiba sisixhobo esixhaphakileyo soshishino kunye neenjongo zemfundo. Ukuba “yi-Intanethi yabantu” iinkampani ziye zajika zajonga kwelo qaqobana labantu banxibelelana omnye nomnye, elithe...
Ngomhla odlulileyo ndandikuxelela ngeendaba ukuba i-2.0 ye-PlexEarth Tools ye-AutoCAD iya kuzisa, enye yezona zinto zibalulekileyo eziphuhliswayo endizibonayo kwiGoogle Earth lilungu le-AutoDesk Developer Network (ADN). …
Kwiposti yangaphambili siye sabonisa umfanekiso oqulethe imigca yecontour, ngoku sifuna ukuyiguqulela kwi-Civil 3D contours. Yenza idijithali iigophe Kule nto kukho iinkqubo eziphantse zenze inkqubo, njenge-AutoDesk Raster Design, ilingana ne-Descartes...
Ngaphambi kokuba sibone indlela yokudala imigca yecontour eqala kuthungelwano lwamanqaku athatyathwe entsimini. Ngoku siza kubona indlela yokwenza, ukusuka kwiigophe esele zikhona kwimephu eskeniweyo. Kanye njengokuba senzile ngoyilo lwendlela, yiza...
NgoNovemba wonyaka odlulileyo ndenze uvavanyo lwe-1 ye-PlexEarth Tools ye-AutoCAD, phakathi kwezinto ezintsha ezibandakanya ukusebenzisana kwe-AutoCAD kunye neGoogle Earth. Kwesi sihloko kukho uphuhliso olunje ngeStitchmaps, Kmler, CounturingGE, kml2kml,…
…ukuthengisa amandla okwenza isoftware yasimahla kunzima kunokuqinisekisa igosa ukuba lenze ityala elohlwaywayo (ukukhwabanisa) ngento engenzi isoftware yamaxabiso aphakamileyo. Kutshanje uBentley uphehlelele iphulo lokukhuthaza iBentley…
I-Lisp yokuguqulwa kunye nokusebenza 1. Guqula iinyawo ukuya kwiimitha kunye ne-vice versa Lo mgaqo owenziwe nge-Autolisp, usivumela ukuba siguqule ixabiso elingeniswayo ukusuka ezinyaweni ukuya kwiimitha kwaye ngokuphambene noko, umphumo uboniswa kumgca womyalelo. Nalapha...
Umnqweno oqhelekileyo womsebenzisi we-AutoCAD kukudibanisa neGoogle Earth, ukukwazi ukusebenza kumfanekiso wokuba loo nto yokudlala, nangona ukuchaneka kwayo kungathandabuzeki, yonke imihla sifumana izinto ezingcono kwaye luncedo endaweni yokungabi nayo ...
Ngubani ongafuni ukuba netafile ethelekisa iindidi ezahlukeneyo zesoftware ye-GIS kunye nokusebenza kwe-topography ukuze enze isigqibo sokuthenga? Ewe, into enjalo ikhona kwiNdawo yokuQala, kubandakanya abavelisi bokusetyenziswa okudumileyo...